Nadiifinta aad Mac waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan in la sameeyo inay hubiyaan in habka tahay mid amaan ah. Si kastaba ha ahaatee dad badan oo aan ka fiirsan iyagoo u nadiifsan Mac. Waxaa jira barnaamijyo kala duwan oo lagu soo bandhigay suuqa ee isku dayaya in ay ka dhigto nadiifsan Mac. Mid ka mid ah tan waa software CleanMyMac . Mac kasta u baahan yahay inuu si joogto ah in la hayo haddii uu dhisay-in HDD iyo si ka badan haddii ay tahay SSSD.
Sidee CleanMyMac shaqee?
CleanMyMac waa gabal cajiib ah Mac software nadiifsan. Waa ay awoodaan in ay lacag la'aan ah ilaa gigabytes daraasiin ee drive iyo sidoo kale waxaa fiican. Isla mar ahaantaana ay tahay in la kordhiyo waqtiga hawlgalka ay la taaban karo. Haddaba haddii mid ka mid jeclaan lahaa inuu ka ilaaliyo drive sida nadiif ah intii suurto gal ah, dabadeedna wuu ka isticmaali kartaa software CleanMyMac. Waxaa kaalin weyn ka qaataan hubinta in aad shaqada iyo gaar ahaan faylasha loo soo agaasimo. Waa mid ka mid ah codsiyada ugu wanaagsan ee laga helo suuqa maanta.
Faylal ay taageerayaan Memory Nadiif ah
Geedi socodka ah ee nadaafadda aad Mac waa mid fudud oo loo sameeyo si toos ah. Waxaa jira faylasha ifferent d in la nadiifin karin ama la tirtiro ka meyska ah sida:
LogsUser iyo System Log
Cache FilesUser iyo System Cache Files
FoldersTrashes Trash on HD, drives dibadda iyo sidoo kale iPhoto
Codsiyada ExtrasDev qashinka, Universal Binaries, Languages
IPhoto Library itemsRotated photos Safe, RAWs, go'an Red-Eye
Software Tani smartly ka shaqeeya tan iyo ka dib marka nidaamka ayaa la marsiiyey u junk oo dhan, si toos ah nadiifinta algorithms fin d kuwa files in gebi ahaanba ammaan in la tirtiro. Marxaladani waxay hubineysaa in aad Mac ee waxqabadka ayaa weli deggan xitaa ka dib markii files kuwaas oo laga saaray
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Faylal ay CleanMyMac
Files kabashada kuwaas oo la tirtiray oo u soo diray inuu dib u la la sameeyo fudud by hordhaca ah ee barnaamijyada software kala duwan. Tani ma ahayn arrinku ee sano ka hor. Waxaa xitaa ka fudud haddii loo isticmaalaya computer Mac ah. Geedi socodka ah ee soo kabsaday files in la tirtiray by CleanMyMac lagu samayn karaa noocyo kala duwan oo laga heli karo fursado. Tani waa suurto gal bixiyo faylasha aad lahaa dib u soo hor aad u baahan tahay inuu ka soo kabsado iyaga.
Mid ka mid ah siyaabaha waxaa ka mid ah iyadoo la adeegsanayo mashiinka mar oo qayb ka ah ku-shabeel OS dambeeyay. Leopard waa barnaamij in ay hubisaa in faylasha aad soo celiyay on hab fudud. Waxa ugu horeeya ee la sameeyo waa in la furo codsiga ka dibna dib ugu heer ah in aad rabto in aad si ay u helaan aad file safraan. Waxa soo socda waa in ay ku dhufo "celin '. Tani waxay ka dhigi doonaa file waxaa si otomaatik ah kaalinta ay folder asalka hor intii aan la saaro ama la tirtiray. Haddii mid ka mid ah waa xubin ka tirsan Mac waxaad isticmaali kartaa 'raad raac ". Feature Tani waxay u ogolaaneysaa in ay dib u files mid uu si adag drives, iDisk ama CD / DVD. Waa waqtigan in aad hadda dooran kartaa qorshe fakasho oo uu furmo suuqa kaabta ka hor xulashada files in aad rabto in la soo celiyo. Wax buul ka waa in la guji 'celin'. Mid ka mid ah ayaa fursad u ah in ay haystaan ​​nidaam dib kaas oo awood kuu si loo soo celiyo dhammaan faylasha ku jira oo raad raac ah ama kuwa files in aad dooratay.
> Resource > Mac > CleanMyMac - ugu caansan Tool in nadiifi Your Mac